जासुस बुहारीको कथा [फिल्म समीक्षा : राजी] - मनोरञ्जन - नेपाल
फिल्म : राजी | रेटिङ : ३/५
हिन्दी फिल्ममा भारतको महिमा गाउनु अनि पाकिस्तानको धज्जी उडाउनु के नौलो भयो र ? अतिराष्ट्रवादको भ्रान्तिमा रुमल्लिएका हुन्छन् यस्ता फिल्म । त्यसो त, बिनापूर्वाग्रह मन छुने कथा पस्कने साहस र इमानदारी देखाउने फिल्ममेकर हुँदै नभएका होइनन् । पछिल्लो छिमलकी उदाहरण हुन्, मेघना गुलजार । उनी निर्देशित राजी पाकिस्तानमा विवाह गरेर जाने भारतीय एजेन्टको कथा हो । तर, यसले भारतको एकोहोरो स्तुतिगान गाउँदैन, बरु एउटी निर्दोष केटीको माध्यमबाट दुवै देशका खुफिया एजेन्सीको खुराफातलाई सतहमा ल्याउँछ ।
यो फिल्म हरिन्दर सिक्काको उपन्यास कलिङ सहमतमा आधारित छ । मुख्य भूमिकामा आलिया भट्ट बुलन्द लाग्छिन् । तर, फिल्म सलल बगेको मात्र छ, विषयवस्तुको गाम्भीर्य अनुरूप गहिराइमा पुगेको छैन । थ्रिलर फिल्मको विशेषता अनुरुप दर्शकलाई चक्मा दिने पर्याप्त ‘ट्वीस्ट’ पनि छैन ।
सन् १९७१ को भारत–पाक युद्धको कथा हो, राजी । भारतीय एजेन्ट हिदायत खान (रजित कपुर) आफ्नी छोरी सहमत (आलिया भट्ट)लाई एजेन्ट नै बनाउँछन् । भर्खर कलेज पढिरहेकी सहमतको पाकिस्तानी आर्मी अफिसरका छोरा इकबाल (विक्की कौशल) सँग विवाह गराइदिन्छन् । सहमत पाकिस्तान जान्छिन् । बुहारी मात्र होइन, जासुसको रूपमा पनि । इकबाल र उसको दाजु पनि सेना नै हुन्छन् । यस्तो सैनिक परिवारबाट भारतीय एजेन्सीलाई सूचना दिन सहमत सफल हुन्छिन् कि पाकिस्तान गएपछि आफ्नो ड्युटी नै भुल्छिन् ? फिल्म यस्तै सवाल वरपर घुमेको छ ।
फिल्मको सुरुआत परम्परागत शैलीको छ । पहिलो दृश्यबाटै ‘फ्ल्यासब्याक’तिर लगिन्छ तर, जसै सहमतको प्रवेश हुन्छ, रोचकता थपिँदै जान्छ । सहमतको चरित्रीकरणमा निकै मिहिनेत गरिएको छ । त्यसैले त कठोर मिसनका लागि पाकिस्तान पठाउनुपूर्व देखाइएका एकाध दृश्यबाटै उनीप्रति माया पलाउँछ । कलेजका साथी, बुबा, आमा र एजेन्सीका अधिकारीसँगको उनको सम्बन्धलाई सूक्ष्म शैलीमा उतारिएको छ । फिल्म पूरापूर सहमतमा केन्द्रित रहेकाले पनि निर्देशक मेघनाले उनको चरित्र स्थापित गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गरेकी छैनन् । यसको पटकथा मेघना र भवानी लेयर मिलेर लेखेका हुन् । तर, उनीहरू इकबालको घरभित्रका दृश्यबाट कथामा आवश्यकता अनुरूप घर्षण ल्याउन चुकेका छन् । घटनाक्रम थ्रिलर फिल्मका सामान्य पारखीले समेत अनुमान लगाउन सक्ने ‘ट्रयाक’ बाहिर जाँदैन । भान्से चरित्रको रहस्यलाई बाँधिराख्न चुकेकी छन् निर्देशक । तर, यहीबीच पनि सहमत र इकबालको प्रेमले जोकोहीको मन जित्छ ।
फिल्ममा पत्याउन हम्मेहम्मे पर्ने सिक्वेन्सको खडेरी छैन । जस्तो, इकबालको घर उच्च सुरक्षा घेरामा हुन्छ । तर, सहमतले सजिलै ट्रान्समिसन राखेर सूचना प्रवाह गर्छिन् । भारतीय हुँदाहुँदै पनि इकबालको परिवारले उनीप्रति थोरै पनि शंका गर्दैन । भारत–पाक सम्बन्ध ज्यादै तनावग्रस्त छ । तर, सहमतको बिहेमा कुनै समस्या उत्पन्न हुन्न । त्यसमाथि मध्यान्तरसम्म खासै ठूलो घटना पनि हुन्न । तर, भान्सेको हत्यासँगै दर्शकमा ढुकढुकी बढ्दै जान्छ । इकबालका दाजु र भाउजुको चरित्रलाई प्रभावकारी शैलीमा प्रयोग गरिएको छ ।
निर्देशकले एउटा सामान्य मानिस एकपछि अर्को फन्दामा फस्दै जाने विडम्बनालाई मर्मस्पर्शी ढंगले उतारेकी छन् । सहमतले इकबाललाई गोली ताकेको अनि भारतीय टोलीबाटै प्रायोजित रूपमा बम पड्काइएको दृश्य बिर्सन सकिन्न । खास ठूलो सिक्वेन्सबिनै पर्दामा दिमागलाई तानिरहने मामलामा फिल्म सफल छ । भारतीय एजेन्सीको स्वार्थीपनालाई उदांगो पार्ने सवालमा मेघनाले आनाकानी गरेकी छैनन् । फिल्ममेकरका रूपमा दुवै देशप्रति उनको उतिविघ्न आग्रह र पूर्वाग्रह झल्कन्न । फिल्मको ‘ब्युटी’ यही हो ।
हाईवे, उड्ता पञ्जाब, डियर जिन्दगीपछि राजीमा आलिया दमदार भूमिकामा छिन् । यस्तो चुनौतीपूर्ण पात्रलाई जीवन्त बनाएर उनले आफूलाई आम अभिनेत्रीभन्दा विशिष्ट सावित गरेकी छन् । यहाँसम्म आइपुग्दा उनी लामो रेसकी घोडा हुन् भन्नेमा शंका रहेन । मायालु पति र पाकिस्तानी सेनाका रूपमा विक्की कौशल जबर्जस्त लाग्छन् । उनी र आलियाको ‘केमेस्ट्री’ गज्जब छ । अस्वथ भट्ट, आरिफ जाकरिया, रजित कपुरलगायतका सहायक कलाकारले पनि प्रशंसनीय काम गरेका छन् । अरिजीत सिंहले गाएको ‘वे वतन...’ले फिल्मको भावलाई आत्मसात गरेको छ । मेघनाले संवेदनशील विषयलाई बिनातडकभडक दृश्यभाषामा उनेकी छन् । तर, राजी उनको अघिल्लो फिल्म तलबारझैं उच्चस्तरको होइन ।
आलियाका फ्यानले मात्र होइन, भारत–पाक सम्बन्ध र त्यसभित्र गुम्सिएका पीडालाई नजिकबाट नियाल्न चाहनेले राजी हेर्दा निराश हुनु पर्दैन ।
प्रकाशित: जेष्ठ ४, २०७५
आँचलले पारिश्रमिक बढाएपछि...
भन्न बाँकी हजार कथाहरु